နေ့: ဇန်နဝါရီလ 2, 2020
Marmaray သည်ခရီးသည် ၅၀၀,၀၀၀ နှင့်အတူစံချိန်တင်ခဲ့သည်
Cahit Turhan သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် Marmaray မှမြို့တော်တွင်လည်ပတ်သည် Istanbul, YHTs နှင့်အခြားရထားများရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အဆင်ပြေစေသည်။ Separation Fountain-Kazlıçeşme [ပို ... ]
တူရကီ Transit စင်္ရောက်ရှိခဲ့သည်ဖြစ်လာ
ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan, တူရကီ၏အစီအစဉ်ထဲက 2019 အတွက်အဓိကရထားလမ်းဥရောပ Voice မှတရုတ်ကနေပထမဦးဆုံးအကူးအပြောင်းရထားတဦးဖြစ်ပါသည်, Marmaray နှင့်ဘာကူ-Tbilisi-Kars ရထားလမ်းဟာပူးတှဲဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးတူရကီ Master Plan အနာဂတ်ဖြစ်လာ Bases
အာရှဥရောပနှင့်တူရကီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်စခန်းသို့ဖွဲ့စည်းရန်ရည်ရွယ်ဟုဆိုသည်အကြားအဓိကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်္ကြံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Cahit Turhan ။ ရထားလမ်း ဦး စားပေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Master Plan ၏နယ်ပယ်အတွင်း, [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Cahit Turhan မြန်နှုန်းမြင့်ရထားသစ် (YHT) ကိုစတင်တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နောက်ဆုံးသုံးလပတ်တွင်သယ်ယူပို့ဆောင်သောနေ့စဉ်ခရီးသည်အရေအတွက်သည် ၃၀,၀၀၀ အထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုသူကပြောသည်။ Turhan, TCDD သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc. [ပို ... ]
မြို့တော်အလယ်ပိုင်းနှင့်ခရိုင်များရှိမြေအောက်ရထားများ၊ တံတားများနှင့်အချည်းနှီးသောနံရံမျက်နှာပြင်များနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဗေဒ၊ အလှဆင်ခြင်းနှင့်အနုပညာလက်ရာများကိုရေးဆွဲရန် Ankara Metropolitan Municipality မှခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ မြို့ပြဗေဒဌာန [ပို ... ]
Kart54 သည် 2019 ခုနှစ်တွင် 15 သန်းထက်ကျော်လွန်
Metropolitan မြူနီစီပယ်က Sakarya သို့မြန်ဆန်လွယ်ကူပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသော Kart54 သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လူပေါင်း ၄၇,၆၃၉ ဦး ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အတွင်းအသုံးပြုမှုအရေအတွက် ၁၅ သန်းကျော်သွားသည်။ Sakarya [ပို ... ]
Kocaeli Intercity Bus Terminal သည်တစ်နှစ်အတွင်းလူသုံးသန်းအမှုဆောင်ခဲ့သည်
Kocaeli Intercity Bus Terminal သည်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်နိုင်ငံသားများအတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။ ခရီးသည်များအပြင်၊ သွားရောက်လည်ပတ်လိုသူများ၊ စစ်သားများကိုလွှတ်ခြင်း၊ ကဖေးတွင်အချိန်ဖြုန်းခြင်း၊ [ပို ... ]
မီးရထားအလုပ်သမားစျေးကွက် DEMAR ပိတ်ထား!
မီးရထားဝန်ထမ်းများတည်ထောင်သည့်သမဝါယမအသင်းပိုင် DEMAR ကိုပိတ်ထားသည်။ အဆိုပါနေရာတစ်ခုတည်းကိုသင် SSI သံစားသုံးသူသမဝါယမထူထောင်ထားပြီး 1983 ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းထားသည့်မီးရထားအလုပ်သမားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များ၏တူရကီ Wagon စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ A.Ş. (TÜVASAŞ) တွင်အထူးဝန်ဆောင်မှုစျေးကွက်အားငါပေးမည် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ရှိနဖူးစည်းစာတန်းပါသောခရီးသည်များကိုစောင့်ဆိုင်းရန်တားမြစ်ထားသည်။ ခရီးသည် the ည့်သည်များအတွက်forရိယာအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးကြီးကြပ်ရေးမှူး Ismail Sanli သည်လုံခြုံရေးကော်မရှင်ရရှိခဲ့သည် [ပို ... ]
YenikapıHacıosman Metro သည်စနေနေ့ ၈ ရက်တွင်
စနေနေ့တွင် M2 Yenikapı - Hacıosmanလိုင်းပေါ်တွင်စနေနေ့တွင်ရထား ၈ စီးနှင့်ရထား ၈ စီးနှင့်အတူ Istanbul Metropolitan မြူနီစီပယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည်လိမ့်မည်။ ခရီးသည်တင်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ၃၃ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာလိမ့်မည်။ Metro, Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) ၏လက်အောက်ခံ [ပို ... ]
၁ နှစ်အတွင်း Izmit ပင်လယ်ကွေ့ကိုညစ်ညမ်းစေသောသင်္ဘော ၁၃ စီးအတွက်ဒဏ်ငွေ ၁၃ သန်း
Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ဌာနပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ, Izmit ဂလားပင်လယ်အော်အတွက်ညစ်ညမ်းမှုမှ passage မပေးခဲ့ပါဘူး။ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်သင်္ဘော ၁၃ စီးပါ ၀ င်သည် [ပို ... ]
Denizli ရှိ ၇ မှ ၇၀ အထိလူတိုင်းအားကစားလုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းအားလုံးကိုစုစည်းပေးသော Denizli Metropolitan Municipality သည်ဆောင်းရာသီခရီးသွား the ည့်ဆွဲဆောင်စင်တာဖြစ်လာသည့် Denizli နှင်းလျှောစီးစင်တာ၌အခမဲ့နှင်းလျှောစီးသင်တန်းကိုစတင်သည်။ Denizli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး, [ပို ... ]